Xaqiiqda cajiibka ah ee lagu kordhiyay Websaydhka dhacdadii Nofeembar | Waxaan ka socdaa mac
Shalay, Apple waxay ku casuuntay qof walba dhacdadiisa cusub ee dhici doonta Nofeembar 10. Waxaan horey u haysanay xusuusinta YouTube iyo cinwaanka Websaydhka meesha aad ka arki karto isaga oo nool (annaga, maxaa yeelay waxay daahfurayaan daahitaankiisa. Isbarbaryaac). Waxaan sidoo kale leenahay barta internet-ka ee Apple, oo ah halka xafladda laga baahin doono iyo halka aan ku dari karno xusuusin. Intaas waxaa sii dheer, degelkani wuxuu ka kooban yahay wax la yaab leh qaabka xaqiiqda la kordhiyay.
In Apple ay muhiimad badan siiso xaqiiqda la kordhiyay ma ahan wax cusub. Tan iyo markii la bilaabay iskaanka LiDAR IPad-ka, waxaan ogeyn inay shirkadu dooneysay qaabkan cusub ee ay ku arkayso deegaankeenu inuu noqdo xaqiiqo cusub (waxaan jeclaan lahaa inay sidaas ahaato oo aysan ahayn in hada aan helno xaqiiqo cusub oo sabab u ah faafida darteed) waxayna siineysaa muhiimadda waxay leedahay oo ka sarreysaa dhammaan kuwa doonaya.
Tiknoolajiyaddan waxaa horey u lahaa iPhone 12 iyo isticmaaleyaal badan (gaar ahaan barnaamijka Apple Insider) oo horeyba u lahaa terminaalkan ayaa soo ogaaday ama waxa ku qarsoon degelkan. Animation ah qaab xaqiiqda la kordhiyay taas oo lagu arki karo quruxdeeda dhammaan fiidiyaha soo socda, oo uu soo diray isticmaale Twitter:
Apple waxay ku darsatay muuqaal kale oo wanaagsan oo AR ah martiqaadkeedii ugu dambeeyay. @abdisalaam pic.twitter.com/7t6y3vZHvh
- William Gallagher (@WGallagher) November 2, 2020
Markay ku jiraan websaydhka dhacdada Apple, isticmaalayaashu waxay riixi karaan astaanta Apple si ay u helaan aragti dhab ah oo la kordhiyay qalabka oo dhan. IOS, iPadOS, iyo macOS. Qeybta dambe waa inaan soo dejino feylka oo aan ku aragno animation-ka Muuqaalka Degdegga ah. Astaanta weyn ee Apple waxay ku dhex socotaa animation na xasuusinaysa sida shaashadda MacBook u u furmo una xirmo. Markay u muuqato inay furan tahay, midabada casuumaaddu waxay u soo baxayaan banaanka sida shaashad dhalaalaysa oo dhalaalaysa.
Qaar ka mid ah dadka isticmaala ayaa soo sheegaya dhibaato ayaa ka haysata iyaga ka daawashada iPad-ka. Si kastaba ha noqotee ma jiraan wax caqabad ah markii la isticmaalayo iPhone.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Xaqiiqda cajiibka ah ee lagu kordhiyay websaydhka dhacdada Nofeembar
Spotify waxay ka hirgelinaysaa toos u soo dejinta Apple Watch